Akụkọ - [Asia okenye okenye AAE 2020] August 25-27, 2020, Hong Kong Convention na Ngosi Center
Asia Adult Expo (AAE) biri nke ọma na Hong Kong Convention na Ngosi Center. Ọ na-ezukọta banyere ndị ngosi 200 na ụdị si China, India, Taiwan, Netherlands, New Zealand, Russia na United States. Na ijikọta ihe eji egwuri egwu ndị okenye, uwe na-adịghị mma, ngwaahịa ahụike, DBSM na ndị nrụpụta na ụdị ndị ọzọ metụtara ya, AAE na-enye ndị ọkachamara ọkachamara ọtụtụ nhọrọ mara mma mara mma na ụdị ejiji.
N'afọ a, ihe dị ka ndị ọkachamara ụlọ ọrụ 3,800 sitere na mba na mpaghara 52, ihe dị ka ndị ọbịa azụmahịa 4,800 kwadoro site na ndị ọbịa ọkachamara si mba 52 na mpaghara dị iche iche, gụnyere Australia, Brazil, United Kingdom, Canada, Switzerland, Chile, China, Colombia, Denmark, Egypt, France, Germany, Hong Kong, Indonesia, India, Italy, Japan, Kenya, South Korea, Macau, Mexico, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Panama, Philippines, Poland, Russia, Singapore, Sweden, Thailand, Turkey, Ukraine , United States, Vietnam, Spain na South Africa. Ndị na-ege ntị si n’ebe dị anya bịa ịzụrụ, wulite netwọkụ, nyochaa ikike mmepe nke ahịa ọhụụ ma chọta ndị mmekọ. Ezigbo nzaghachi sitere n'aka ndị ngosi na ndị ọbịa azụmaahịa na-egosi na netwọkụ nke ụlọ ọrụ mba ụwa nke AAE na-enye usoro azụmaahịa ọkachamara na nkwado maka ụlọ ọrụ ndị okenye.
Ndị na-eme ihe ngosi na mgbakwunye na-egosiputa ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ụmụ bebi ndị okenye, arịa nwoke na nwanyị, ngwaahịa ahụike na ngwaahịa ndị ọzọ, uwe ime na ndị na-emepụta ihe na mpaghara dị iche iche dọtara uche nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa. N'ime afọ ole na ole gara aga, ọchịchọ ụwa maka uwe ime na-arịwanye elu, na-eme ka ụmụ nwanyị na-amata onwe ha banyere ahụ ha, ma na-amụtakwu banyere otu ụdị uwe ime ga-esi mee ka obi sie ha ike na mmekọahụ. Asaa 'til Midnight, SUNSPICE, EDENKISS ... Ndị na-ahụ maka azụmahịa na-ekwu okwu ọma banyere ụdị sexy na-egosipụta, na-egosipụta ikike nke ngwaahịa nwanyị na-agba ọtọ. Ọtụtụ ndị na-emepụta ihe dị elu gosipụtara ngwaahịa ndị dịka corsets, akwa sexy, akwa sock, uwe ime ụmụ nwoke na SM.
AAE Nzukọ Ndị okenye Kwa Afọ n'ofe ọdịnala na ụlọ ọrụ ndị metụtara ya
Kemgbe afọ 2017, “Ọgbakọ Ndị okenye na-eme ọhụụ” kpọrọ ndị na-ahụ maka okwu n ’ụwa dum ka ha kesaa ozi kachasị ọhụrụ na teknụzụ ndị okenye na ngwaahịa, ahụike gbasara mmekọahụ, ọnọdụ ndị okenye, usoro mgbasa ozi na usoro ndị ọzọ. N'afọ a, a kpọrọ ndị ọkachamara ụlọ ọrụ dị mkpa karị, dị ka ndị mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze nke France, ọgwụgwọ nwoke na nwanyị na ndị ọkachamara ahụike, yana ụlọ ọrụ nyocha mba ụwa. Site na "Na-ekwu maka nchekwa na nnabata nke ihe egwuregwu ụmụaka", "Evolution of Devices Interactive", "Otu esi azụ ahịa site na Social Media: Ndị LGBT na Ndị Obodo" na "Mmekọahụ Mmekọahụ, Ire na Nchedo", AAE sonyere n'akụkụ niile Azụmaahịa na azụmahịa ndị nleta na-aghọta ihe ọmụma nke ụlọ ọrụ ndị okenye.
AAE na-aga n'ihu na-eto eto na ụlọ ọrụ ahụ, ga-adọta ọtụtụ ndị ngosi, na-akpọ ndị na-azụ ahịa azụmaahịa mba ụwa ọzọ, na-agbanye ọtụtụ ihe ọhụrụ, site na ihe ngosi ọkachamara B2B iji mepụta ezigbo mkparịta ụka azụmahịa maka ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa. Oge ngosi ọzọ bụ August 25-27, 2020. Hụ gị na Hong Kong Mgbakọ na Ebe Ngosi!
Silibọn ndị ji ya arụ ọrụ, Sexmụ nwanyị Sexmụaka Sexmụaka, Clitoral Vibrator, G-Abụọ Vibrators, oke oyibo, Ultmụaka Mmekọahụ nke Ndị okenye,